WAA MAXAY SABABTA AY DIGAAGADU U DHINTAAN BROILER: SABABAHA IYO CIRIBTIRKA - BEERAHA DIGAAGA
Badanaa digaagga broiler waxaa lagu kobciyaa beeraha digaaga.
Qaaduhu waxay helayaan ukun hatch ah oo loogu talagalay taranka taranka.
Mararka qaarkood milkiilayaasha waxay iibsadaan digaagga naftooda, laakiin maalinta xigta waxay helayaan hal ama in ka badan.
Maxay tahay sababta cawaaqibta noocaas ah, waxaan isku dayi doonaa inaan fahamno maqaalkani?
Dad badani way waydiiyaan su'aalahan. Ka dib oo dhan, geedka broiler ee shimbiraha waxaa loo arkaa mid aad u xoog badan oo caafimaad leh.
Aynu ka hadalno sababaha dhimashada broilers
Dhimashada sare ee digaagaha broiler ayaa ah sababta ugu weyn ee diidmada beeraleyda digaaga badan oo ka yimaada taranta.
Qaar badan oo ka mid ah ayaa ka careysnaa in iibka dhowr darsin oo digaag ah sida ugu badan ee loo baabi'iyo, tirooyin yar oo keliya ayaa nool.
Dhab ahaantii, aad ayay u xoogan yihiin, kaliya waa inay ahaadaan kuwo si fiican loo kormeero oo loo siiyo iyaga ugu muhiimsan. Iyadoo dhammaan xeerarka lagama maarmaanka u ah korniinka iyo horumarkooda, digaagga ayaa kori doona boogaha iyo xuduudaha.
Marka aad iibsaneyso digaagga broiler waxaad u baahan tahay inaad taxaddar u yeelatid arrimaha soo socda:
Ka taxadar falalka iyo socodka digaagga.
Indhaha qoyaanka waa in uu furan yahay, waa inaysan la soconin daal ama xanuun.
Bukaanka qaba digaagga broiler dhalashada kadib dhalashada ayaa markiiba la arki karaa. Iibiyeyaashu waxay markiiba ka saaraan xoolaha guud. Laakiin markasta, markaad iibsato digaagga waxaad u baahan tahay inaad eegto.
Qor dhammaan sababaha dhimashadooda:
Mararka qaar sababta geerida digaagaha broiler waxay noqon kartaa heerkulka hoose ee hawada qolka, sababtoo ah taasi way xakameyn kartaa.
Xilliga ugu wanaagsan ee iibsiga digaagga broiler waa guga, bisha ugu wanaagsan waa Abriil. Haddii aadan awoodin inaad samayso xaalado raaxo leh ka hor inta aadan iibsan digaagga, markaa waxaa ugu wanaagsan inaadan iibsan digaagga, sababtoo ah xaaladaha xun digaagga ma noolaan doonaan.
Heerkulka hawada ee looga baahan yahay heerkoodu waa 29-30 degrees Celsius. Laakiin inta lagu jiro koritaanka, heerkulka waa in la yareeyo ilaa 24 darajo Celsius.
Haddii aad digaaga iibsato xilliga xagaaga, tusaale ahaan bisha Luuliyo, markaa kuleylku sidoo kale wuxuu u dhiman karaa digaagga. Sidaa darteed, marka lagu hayo xilliga xagaaga, waxaa lagama maarmaan ah in hawo lagu sii daayo.
Haddii ay dhacdo iftiinka saboolka ah, digaagga ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sidoo kale xanuunsadaan ama xitaa u noqdaan dhimasho iyaga. Toddobada maalmood ee ugu horeeya ee qolka coop waa lagama maarmaan in laydhka ka baxo maalinta oo dhan, maxaa yeelay digaagga waxay cabbaan biyaha oo cunaan hadhuudh markasta.
Waa in la xusuusnaado in maalmaha ugu horreeya nolosha ay aad muhiim ugu tahay horumarinta digaagga broiler. Waqtigaan, waa in la siiyaa dhismaha vitamin muhiim u ah horumarkooda. Xaaladaha qaarkood, waxay u baahan yihiin in la siiyo antibiotics.
Sabab kale oo muhiim ah ee dhimashada digaagga broiler waa coccidiosis. Bakteeriyada cudurkaan waxay saameyn kartaa ku dhowaad dhalashadooda, laakiin ma ogaanaysid isla markiiba, cudurku wuxuu muujinayaa kaliya dhowr bilood kadib.
Sida tallaabooyinka ka hortagga ee cudurkan, waxaad u baahan tahay inaad ku darto dhowr garaam oo furazolidone in ay cunto, xaddiga daroogada waa in la xisaabiyaa iyada oo ku saleysan tirada digaagga. Laakiin mararka qaarkood waxay dhacdaa in aanay suurtagal ahayn in la helo daroogadaas oo lagu beddeli karo daawooyinka sida norsulfazole, etazole ama sulfadimezin.
Si looga hortago muuqaalka bakteeriyadan ku jirta caanaha, waxay u baahan yihiin inay ku daraan xal daciif ah ee kaneecada. Si aan u dhicin bakteeriyadan, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u nadiifiso qolka qashinka digaaga, sidoo kale waxay ubaahan tahay waqti ka waqti si loo daaweeyo dabaqa iyo derbiyada lime.
Shimbiraha Broiler waxaa ku jira cudurro badan, mid ka mid ah waa escherichiosis. Cudurkan waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee dhimashada broilers. Digaagga leh difaac aad u daciif ah ayaa si gaar ah u saameeya cudurkan.
Cudurkaan waa mid ka mid ah hanjabaadaha ugu weyn ee dhimashada shimbiraha oo dhan adduunka oo dhan, taas oo ah khasaaro weyn oo weyn. Sababaha cudurkan waa xaalad nadaafadeed, daciifinta waalidka, maaha biyo nadiif ah iyo cunto tayadoodu liidato, hawo xun oo qolka iyo sababaha kale.
Cudurkani wuxuu muujiyaa isbuuca koowaad ee nolosha digaagga broiler. Calaamadaha cudurku waa: nafaqo xumo, iyo miisaanka oo si deg-deg ah u lumay; digaagga oo aan dhaqdhaqaaq lahayn; marka ay neeftu ku jirto qandhada, waxaa la maqlaa hindhis. Sida laga soo xigtay dhammaan xogaha ay soo ururiyeen saynisyahannadu, dhimashada qandhada broiler ee cudurka this qaar ka mid ah beeraha digaagga gaarey ilaa 31 boqolkiiba.
Sabab kale oo dhimasho ah ee digaagga broiler waa digaagga dayacan cillad. Xaaladahan, dembiiluhu waa beerta digaaga ee iibiya digaagga.
Quudinta xun ee digaagga ayaa sidoo kale sabab u ah dhimashada. Sidaa daraadeed, waa in la siiyaa quwad wanaagsan oo wanaagsan.
Cudurada kala duwan ee faafa ayaa keena dhimashada digaagga broiler.
Sabab kale oo muhiim ah waa - peck. Rasklev waxay ku jirtaa ereyadaada, korniinka xayawaanka. Sababta ugu weyn ee xaaladdan waa iftiin aad u iftiiminaya digaagga, iyo sidoo kale la'aanta caleemaha feedhka, qadar yar oo borotiinka ah ee quudinta, iyo sidoo kale haddii digaagga lagu hayo qol aan nadiif ahayn oo ay qoyaanku aad u sarreeyaan.
Marka astaamaha noocaas ah ay ka dhacaan digaagga, waa in la siiyaa cabitaan ah biyo, taas oo ay lagama maarmaan tahay in lagu daro citric acid.
Si loo ogaado sababta geerida digaagaha broiler, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato astaamaha.
Sababta kale ee dhimashada ee digaagga broiler iyo xataa shimbiraha qaangaarka ah waa mid aan loo helin ilaalin. Sidaas darteed xitaa bisadaga xayawaankaaga ayaa kordhin kara dhimashadooda. Sidaa darteed, si ay uga tagaan iyaga oo aan lala joogin maaha mid u qalma.
Ka hortagga Cudurka Broiler ee lagama maarmaanka ah
Sidaa daraadeed, waxaan ku taxluuqa dhammaan sawirada muhiimka ah tallaabooyin ka hortag ah:
Marka hore, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyinka jeermiska. Ka hor intaan la bilaabin macdanta guriga, wax walba waa in si fiican loo nadiifiyaa, fayodhowrka, xoqan, xoqan, dhulka waa in la daaweeyaa.
Waxyaabaha labaad ee lagu daawado waa heerkulka hawada ee qolka digaagga. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la hubiyo microclimate fiicnayn si loo ilaaliyo chicks ee guriga hen.
Digaagga yaryar, heerkulka cimilada ugu fiican ee dayactirkooda waxay noqon doonaan ilaa 29 digrii, laakiin marka ay qaan gaaraan, waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib tartiib ah loo yareeyo oo si tartiib ah u yareeyo ilaa 23 darajo. Horeba shimbiraha qunyar-socodka ah, waa lagama-maarmaan in guriga lagu qalajiyo waqti ka waqti, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in aysan jirin dabayl aan qolka lahayn.
Si aad u siiso raaxada ugu badan ee digaagga ee broilers maalmaha ugu horreeya ee nolosha, waxay u baahan yihiin in la siiyo dhismaha vitamin muhiim ah, oo labaatan cisho marba waa la soo celin karaa.
Badanaa waxaa jira dhibaatooyin noocaas ah oo digaag ku dhacaya jilbaha. Sababta ugu weyn ee xaaladdan waa rickets. Si looga fogaado cayayaanka noocan ah ee chicks ee cuntada waxay u baahan yihiin inay ku daraan saliidda kalluunka.
Xitaa haddii aysan taasi dhicin, waxaa lagama maarmaan ah in lala socdo digaagga socodka, waa inaan la sii daayo muddo dheer. Si aad u yar si joogto ah u baahan tahay in la daawado, si aysan waxba u dhacaan iyaga.
Waxa kale oo suurtagal ah in marar badan la nadiifiyo qolka ay digaagga ku yaalliin, sababtoo ah broilers waxay mararka qaar qaataan qaybo waxtar leh oo ka soo jeeda qashin. Laakiin haddii ay sidaas dhacday in waxaas oo dhan aysan caawinin, digaaguhuna waxay bilaabeen in ay ku dhuuntaan jilbaha, waxay u baahan yihiin inay kuusaaraan vodka afkooda iyagoo isticmaalaya dhuunta.
Cuntada digaagga waa in si joogto ah loo badalo, waxay u baahan yihiin cunto kala duwan. Ma ku dari kartid cunnooyin isku mid ah in ka badan laba toddobaad, haddii aadan u hoggaansanayn xeerkan, markaa caafimaadka digaagga ayaa aad u xun.
Marka quudinta digaagga, qofku ma tagi karo xagjir, markaad quudinayso midna kuma sii dari kartid barandhada la kariyey marar badan cuntada, sababtoo ah waxay si xun u saamayn kartaa caafimaadkooda, marmarka qaarkoodna waxay u horseedi kartaa dhimashada digaagga.
Mararka qaarkood cuntada hadhuudhka ah ee cuntada waxay sidoo kale keeni kartaa geerida digaagga broiler, waxa ugu wanaagsan in lagu daro cunto kala duwan oo cunto ah, laakiin ma aha kuwa ugu raqiisan, laakiin kuwa aad u sareysa. Malaha dhaqaalahaagu ma awoodo inuu iibsado cunto noocaas ah, ka dibna waad samayn kartaa.
Haddii ay dhacdo iftiin aan fiicneyn, digaagaha broiler waxay ku dhici karaan buste. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in lala socdo nalalka.
Lamps guriga waa in lagu rinjoojiyaa ama midab ama cagaaran, laakiin aan ahayn buluug.